खुशीको खबर : लामो प्रतिक्षा पछि खुल्यो मलेसिया रोजगारी ! - jagritikhabar.com
खुशीको खबर : लामो प्रतिक्षा पछि खुल्यो मलेसिया रोजगारी !
श्रमविज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयले श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न अझ बल पुगेको बताए । ‘श्रम सम्झौताले भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र श्रमिकमाथि लागत खर्च नथोपर्ने विषय ज्यादै महत्वपूर्ण थियो । को’भिडपछि श्रम्झौता कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अवस्थाको बेला मलेसिया पक्षले झन सबै खर्च रोजगारदाताकै भनेर घोषणा गरिदिनुले श्रम्झौता थप बलियो भएको देख्छु’, उनले भने, ‘यो नेपाली श्रमिकको लागि हितकर छ । अब काठमाडौंमा पैसा उठाउने म्यानपावरलाई विभागले कस्तो कारबाही गर्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।